IZIQENDU EZINGAMA-25 EZIGQWESILEYO ZOSAPHO LOSAPHO KUFUNEKA UPHINDE UBUKELE NGOKU - ULUHLU LWETV
Iziqendu ezingama-25 eziGqwesileyo zoSapho loSapho kufuneka uphinde ubukele ngoku
I-sitcom yaseMelika yoopopayi, uSapho loSapho, ekhutshwe ngo-1999, sele ikho ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini ngoku. Emva koko
I-sitcom yaseMelika yoopopayi, uSapho loSapho, ekhutshwe ngo-1999, sele ikho ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini ngoku. Emva kokungqubana okuthile, umboniso wazabalaza ukufumana abaphulaphuli, ngakumbi ukusuka kumaxesha amathathu okuqala. UFox wayirhoxisa inkqubo ngo-2002. Nangona kunjalo, emva kokunwenwa ngokuthe chu phakathi kolutsha nakwabafundi beekholeji, uFox wayivuselela kwakhona ngo-2005 kwaye isengomnye weyona midlalo yeTV ibukelwa kakhulu eMelika.
Umboniso ujikeleza kuPeter kunye nenkosikazi yakhe, uLois Griffin, kunye nosapho lwabo lwabakwishumi elivisayo, inja ehlakaniphileyo, kunye nosana olugwenxa oluzifumana zikwimeko ezihlekisayo. Umboniso uqukethe amaxesha ali-19 amade kwaye azalisekisayo. Ngama-episodes angaphezu kwama-300, nazi iziqendu ezingama-25 ezivela kuFamily Guy esicinga ukuba zezona zibalaseleyo, zidweliswe ngokulandelelana kwazo, ngezantsi kunye nenqanaba labo le-IMDB.
1. Ukufa kukwalile (8.3 / 10)
Ixesha lesi-2 Isiqendu 6
UPeter Griffin uzifumana ekwindawo enzima xa kufuneka ehlawule ityala elikhulu lesibhedlele. Wenza yonke into ngokusemandleni akhe ukuzikhupha ekuhlawuleni. Kwisiqendu 6 sexesha lesi-2, uya kubude bokuzibhengeza njengofileyo ukuze aphume kuyo. Kodwa njengoko sibona ebomini, zonke izenzo zinemiphumo. Apha, kwakhona, uKufa kuvela emnyango kaPeter ukuba amngenise. Kodwa njengokuba uKufa eqala ukubaleka emva kukaPeter ukuze ambambe, uyakhubeka aze ajike iqatha lakhe. UPeter ubethwa kukuqonda ukuba akukho nto ingunaphakade, kwaye yonke iQuahog iyaqhekeka. Ukuze izinto zibuyele esiqhelweni, uPeter kufuneka athathe umsebenzi wokuFa kwaye abuyisele yonke into kumkhondo.
2. IDa Boom (8.3 / 10)
Ixesha lesi-2 Isiqendu 3
Usapho lukaGuy lusenokuba yenye yeenkqubo ezithandekayo kumabonwakude ezikhoyo kwiNetflix ngoku, kodwa inazo iziqendu ezithile. Kwi-Da Boom, babonisa ukuba iQuahog ijongeka kanjani emva kokuba i-Y2K bug itshabalalise umhlaba. Kodwa nkqu naphakathi kokonakalisa, uPetros ufumana iindlela zokwenza izinto zibe nzima ngakumbi, eziyindumasi kwaye zithandeka kakhulu kumanqanaba omntu. Kwakukwesi siqendu apho kwabhengezwa ubundlobongela phakathi kukaPeter Griffin no-Ernie, inkukhu enkulu, kwaye lo mboniso wazuza udumo olukhulu.
3. Indlela eya eRhode Island (8.3 / 10)
Ixesha lesi-2 Isiqendu 13
Esi siqendu soMntu woSapho sibonisa kakuhle ubudlelwane bothando phakathi kukaStewie noBrian. Xa i-duo ilahleka emva kokuba kubiwe amatikiti enqwelomoya, kufuneka babuyele ekhaya ngaphambi kokuba uLois afumanise. Uhambo lwendlela olubuyela eQuahog luzaliswe kukuqhushumba kweemvakalelo ezahlukeneyo njengoko isibini sizama ukulandela umama kaBrian, esimba nzulu kwindawo yabucala yabalinganiswa.
4.Izixhobo eziLethal (7.3 / 10)
Ixesha lesi-3 Isiqendu 7
'I-Lethal Weapons' ineziza ezithile ezinomdla ezibandakanyekileyo kuyo. Ngokwexesha elingaphezulu kwezinye izinto, esi siqendu soSapho soSapho sasibandakanya amaxesha abalulekileyo anje ngeLois yokufunda ubugcisa bemfazwe kunye nokuzimela, abantu baseNew York abangenangqondo babezama ukubona ukutshintsha imibala kumagqabi eRhode Island, kunye nokuqhekeka kwesitayile seFamily Guy. zobundlobongela.
5. Ukuthanda nokufa eDixie (8.2 / 10)
Ixesha lesi-3 Isiqendu 12
Usapho lukaGuy luzisa lo mboniso ubalaseleyo kwesiqendu njengoko uhlala unento okanye enye eyenzekayo kuyo. Kubandakanya izinto ezininzi ezinje nosapho luphela kukhuseleko lwamangqina kuMazantsi eSouth emva kokuba uChris abe lingqina lolwaphulo-mthetho. UChris wenza impazamo kwintombazana esemaZantsi yenkwenkwe athi ekugqibeleni ayithande, eya kuthi yahlukane kakhulu. UPeter wenza ubugqwetha kumthetho weMfazwe yamakhaya ngelixa uStewie eqala ibhendi ye-funk.
6. Iphathwe (8.3 / 10)
Ixesha lesi-4 Isiqendu 6
Ngexesha lesi-4, ngokuqinisekileyo, elona xesha lilungileyo le-Family Guy, uPetarded yenye yeqhekeza eliqhelekileyo likaPeter Griffin. Emva kokuphumelela umdlalo woKhuphiswano olungenamsebenzi, ngephanyazo ubanga ukuba yingqondi.
Kulesi siqendu, uPeter wabhengezwa njenge-retard (ke, uPetarded) emva kokuba ecelwe umngeni wokufaka isicelo seMacArthur Genius Grant. Uzama ukuxhaphaza ukuxilongwa kwakhe kwaye afikelele kwinqanaba lokuphulukana nokugcinwa kwabantwana bakhe eCleveland.
7. IPTV (8.6 / 10)
Ixesha lesi-4 Isiqendu 14
Usapho lukaGuy luhlala lunolwalamano oluhle kakhulu kwibhodi yokuhlola. Ayikaze ilale phantsi okanye ngobuqili nanini na xa umboniso bhanyabhanya wawuza kubakho emfanekisweni. Kulesi siqendu soSapho loSapho, uPeter uqala inethiwekhi yakhe yobuqu, engaxilwanga. Nangona kunjalo, izinto ziyaphuma ngokukhawuleza, kwaye uLois kufuneka ayalele i-FCC ukuba ivale inethiwekhi. Le yeyona nto ihlekisayo kunye nesona siqendu sokwenyani soSapho loSapho. Esi siqendu siqulathe enye yeengoma zentsusa ezivela kuFamily Guy.
8. Ndithatha iQuagmire (7.5 / 10)
Ixesha lesi-4 Isiqendu 21
Esi sesinye seziqendu ezimnyama kakhulu kodwa eziqaqambileyo zooSapho bakaGuy. I-Quagmire, nangona iyinto ehlekisayo, bubumdaka bomntu kwaye buzaliswe kukungcola kwe-morales. Kule ngqungquthela, ubonakala ethandana nentombazana kaPeter kwaye eguquka ngokulungileyo. Uthatha isigqibo sokutshata noJoan kodwa kungekudala ufuna ukuphuma. Kodwa uya kubabulala bobabini ukuba umshiya. Yiyo loo nto ngobuqhetseba akhohlisa ukufa kwakhe ukuze uKufa kumsindise kwaye kuthathe uJoan endaweni yakhe.
Dibana neeQuagmires (8.4 / 10)
Ixesha lesi-5 Isiqendu 18
Esi siqendu soMdidi woSapho sijonga enye indawo apho uPeter noLois bengapheli kunye, abathi bakufumanise emva kokubuyela umva ngexesha. Endaweni yokuba uQuagmire noLois batshate. Ubudlelwane obuboniswe phakathi kukaPeter noLois kule ngqungquthela bushushu kwaye buhle, ngokungafaniyo nolwalamano lwabo ukuya kwisiqingatha sokugqibela somboniso. Ukuphela kwesiqendu kuphawulwe ngombulelo kwi-Back To The future kunye ne-Never Gonna Give Up Up eyenziwa nguBrian.
10. Ukuvuna iBlue (8.2 / 10)
Ixesha lesi-6 Isiqendu 1
Kwisiqendu 1 seXesha lesi-6, amandla ayacima eQuahog xa uPeter ebalisa iThemba elitsha kwi-Star Wars IV. Abalinganiswa boSapho bakaGuy badlala abalinganiswa abavela kwi-Star Wars. Nangona esi siqendu sinokuba ngumsebenzi ukuba awunguye umlandeli we-Star Wars, kusafanelekile ukuba ukhankanye.
11. Uyakholelwa okanye hayi, Ukuhamba emoyeni kukaJoe (7.4 / 10)
Ixesha lesi-6 Isiqendu 3
Emva kokuba uJoe efumene imilenze emibini emitsha, uqala ukuhamba. Ngokwendalo, kungekudala uza kudelela kwaye angathandwa ngabanye. Isiqendu siphela ngoPeter kunye neqashiso eligqiba kwelokuba uJoe wayethandeka ngakumbi xa wayekhubazekile. Nangona isiqendu esikhohlakeleyo, uburharha buvuthela yonke into.
12. USteve ubulala iLois (8.4 / 10)
Ixesha lesi-6 Isiqendu 4
Esi siqendu sijikeleza ukukhathazeka kukaStewie ngokubulala uLois. Ke, ngenxa yoko, uyakwazi ukubulala uLois ngokumdubula ngqo entloko. Kodwa emva konyaka, kuza emfanekisweni ukuba uLois wayenomshuwalense wobomi obunzima. Ukurhanelwa kokubulala kwakhe kutshintshela kuPeter, kwaye uyaqhubeka nokuthethwa kwetyala emva kokuba uStewie ethe wafaka uPetros ngengozi kwaye waziyeka ulwaphulo-mthetho. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba agwetyelwe ukufa, uLois ubonakala enkundleni yamatyala ukuziphindezela kuStewie.
13. ILois ibulala uStewie (8.4 / 10)
Ixesha lesi-6 Isiqendu 5
Kulesiqingatha sesibini sokuvula isizini, uLois ubuya njengoko uStewie esiba ngumongameli olawulayo weli lizwe. ULois uyaqonda ukuba nguye kuphela onokuyeka ukucinezelwa nguStewie kwehlabathi ngokumyekisa. Ingxabano ikhokelela kumlo onomdla. Nangona kunjalo, uLois ubuya umva njengoko engakwazi ukubulala owakhe unyana, kodwa nguPeter owenza lo msebenzi egameni lakhe.
14. UMcStroke (7.6 / 10)
Ixesha lesi-6 Isiqendu 8
Rhoqo kunoko, iziqendu zoMdidi woSapho zibonakala ngathi kukudibanisa iziqhulo endaweni yokuceba okwenyani. IMcStroke yenye yezo ziqendu apho indibaniselwano eyothusayo yezinto eyenzekayo njengoPeter ebethwa sistroke, ekhulisa amadevu, kwaye ikwabhengeza iqumrhu elisebenza ngokutya okukhawulezayo. UStewie uqala ukuya esikolweni noChris noMeg kwaye kungekudala uza kuba ngowona mntwana uthandwayo. Nangona isiqendu siziva ngathi sisiqwengana samacandelo, uburharha busenza ukuba kufanelekile ukubukela.
15. Ndiphupha uYesu (8.0 / 10)
Ixesha lesi-7 Isiqendu 2
Kulesi siqendu soMntu woSapho, uPeter ufumanisa ukuba uYesu usebenza kwivenkile erekhodayo. UYesu uthabatha umongameli, uGeorge W Bush, kwinkqubo yokuzityhila kwihlabathi phantsi kwengcinezelo kaPeter. Kodwa esona sizathu sokuba le yenye yezona ziqendu zeFamily Guy zibangelwe kukungxama kukaPeter, 'Surfin Bird', njengoko ebopha abantu izihlangu kwingoma yeTrashmen ecaphukisayo yee-1950s.
16. Indlela eya eJamani (8.1 / 10)
Ixesha lesi-7 Isiqendu 3
Esi sesinye isiqendu sokuhamba ngexesha apho uBrian noStewie, kunye noMort Goldman behla ngo-1939 ePoland. Njengoko bezabalazela ukubuyela okwangoku, abathathu bafika eLondon naseBerlin ngelixa uStewie eziguqula njengoHitler ukuze ebe i-Uranium. Nangona kunjalo, isibuko sika-Stewie kunye noHitler sokujongana ubuso ngobuso kuyahlekisa kwaye omnye kufuneka abukele ngaphambi kokuba babuyele okwangoku.
17. Indlela eya kwiMultverse (9.1 / 10)
Ixesha lesi-8 Isiqendu 1
Kwiindlela ezininzi eziya… kwiziqendu ezivela kuFamily Guy, iNdlela eya kwiMultipverse ngokungathandabuzekiyo yeyona ilungileyo. Ngapha koko, ithathwa ngokuba sesona siqendu sithandwa kakhulu kuthotho lonke. Kwisiqendu sokuqala seXesha lesi-8, uStewie kunye noBrian bahamba ixesha kwakhona kwezinye iindawo ezininzi ezikhoyo. Baye bangqina iinguqulelo zeDisney ngokwazo.
Ekugqibeleni, bathatha isigqibo sokuhlala kwindalo eyahluke mpela kweyabo apho abantu bathobela izinja kwaye izilwanyana zicula. Ubuchopho babuyithanda indalo iphela kwaye baqhekeza umatshini ohamba ixesha ukuze bahlale apho ngonaphakade. Kodwa ekugqibeleni, bahlangulwa ngomnye uSteve noBrian duo.
Le ngqungquthela ye-Family Guy iyaziwa ngokuzama kwayo kunye nokuhlekisa, yingakho ithathwa njengeyona nto ibalaseleyo.
Into, Into, Into ethile, Icala elimnyama (7.7 / 10)
Ixesha lesi-8 Isiqendu 20
Kulesi siqendu soMntu woSapho, njengeBlue Harvest, umbane uyacima, kwaye uPeter ubalisa ibali loBukhosi buBuyela umva ngelixa abalinganiswa abavela kwi-Family Guy bathathe indawo yabalinganiswa be-Star Wars.
19. Kwaye emva koko babembalwa (8.6 / 10)
Ixesha le-9 Isiqendu 1
Kwinkulumbuso yeXesha le-9, uJames Wood umema inani labantu kwindlu yakhe enkulu kwitheko lesidlo sangokuhlwa. Nangona kunjalo, iphefumlelwe nguAgatha Christie Kwaye emva koko akubangakho, iindwendwe zigcine ngokumangalisayo zanyamalala kwitafile yesidlo sangokuhlwa, zishiya ezimbalwa kuphela ukuya esiphelweni. Isiqendu sivela ngaphambi kokuba uJames Wood akhutshwe ekuhlaleni kwaye wayesenza umbono.
20. Indlela eya kwiNtloko yePhondo (8.3 / 10)
Ixesha le-9 Isiqendu 7
Kwiziqendu ezininzi zeFamily Guy ezijongwa nguStewie noBrian's duo, iNdlela eya eNyakatho yePole yinto ekhethekileyo yeKrisimesi apho bobabini bafumana uSanta ophantse wafa kwaye bathatha isigqibo sokugqiba umsebenzi wakhe wokuhambisa izipho. Ikhonkco lamava amnyama ahlekisayo atyhileka kwisiqendu, kodwa isiphelo sihambisa umyalezo wokwenene malunga nokuthanda izinto eziphathekayo kunye nokunyoluka, okwenza ukuba sibe sesinye seziqendu ezilungileyo zeFamily Guy.
21. Buyela kwi Pilot (8.8 / 10)
Ixesha le-10 Isiqendu 5
Le yenye yeziqendu zikaBrian-Stewie, ezigcwele uburharha, idrama, kunye nobukrelekrele. UBrian noStewie babuyela umva ngexesha besebenzisa umatshini wexesha kunye nokuqhula kunye nokugweba abantu babo bangaphambili kumdlalo. Xa uBrian exelela uBrian wexesha elidlulileyo malunga ne-9/11, okwangoku kuguqulwa imfazwe yamakhaya. Njengoko bezikhusela ekubuyeni umva, bavelisa iinguqu zabo ezininzi ngaxeshanye. Ngamaxesha athile ahlekisayo kaBrian noStewie, ukubuyela kwisiqendu somqhubi kunobuqili kwaye kubhalwe ngokucocekileyo malunga nokuhamba kwexesha.
22. ULois Uphuma Kwigobolondo lakhe (7.4 / 10)
Ixesha le-11 Isiqendu 6
Emva kokuba uPeter enze i-toast ehlwempuzeke kakhulu ngomhla wokuzalwa kukaLois, uhamba nobunzima baphakathi kobomi. Uguqula ngokupheleleyo abe ngoyena mntu kumnandi ukuba phakathi kwakhe kwaye athandwe nguPeter, kodwa ekugqibeleni, kunzima kuye ukuqhubeka.
23. Iindlela eziya eVasgas (7.9 / 10)
Ixesha le-11 Isiqendu 21
Kulesi siqendu soSapho loSapho, uStewie noBrian bazithutha besiya eLas Vegas, nto leyo eyenza ukuba umatshini udale esinye isibini kubo. Zombini ezi zibini zihamba malunga neVasgas engaziwayo malunga nenye. Ngelixa omnye wabo esenza imali eninzi, omnye uphulukana nayo yonke into ukuya kwinqanaba lokuba anetyala kwimali mboleko-esinye isiqendu esibonisa le duo njengentliziyo nomphefumlo womdlalo weTV.
liphuma nini ixesha elizayo le-ozark
24. USimpson Guy (8.4 / 10)
Ixesha le-13 Isiqendu 1
Elona xesha lide, iiSimpsons kunye neeNtsapho zooSapho, ezona zimbini zithandwayo zoopopayi, bezisaziwa ngokuba nokhuphiswano olunobuqili. Ke ngoko, kubathabathile ababukeli xa bethatha isigqibo sokwenza crossover yomibini le nkqubo. Kwisiqendu, abakwaGriffins bahlala kwiiSimpsons emva kokuba imoto yabo ibiwe. Nangona kunjalo, emva kwempikiswano eyaqhekeka phakathi kukaPeter noHomer, bobabini bohlukana ngendlela yoluntu. Isiqendu sisisigxina sento ebonisa ukuba ezi zinto zibini zihluke kwaye yintoni amandla kunye nobuthathaka babo, ekugqibeleni okwenza isiqendu sibe yimpumelelo.
25. Ukubhaka ngokungalunganga (7.9 / 10)
Ixesha le-13 Isiqendu 3
Esi sisiqendu apho uLois noPeter bathatha isigqibo ngokuvula ivenkile yecookie. Kodwa ngaphandle kweenjongo zokwenyani zikaPeter, uyayitshintsha kancinci ivenkile ibe yiklabhu yokuhluba. UBrian ungenelela kwizilwanyana ezazifakwe nguStewie ngelixa uStewie ekhula ukuba likhoboka lesiraphu sokukhohlela.
UFam Family ibingomnye weyona miboniso iphikisanayo kumabonakude, noFox evala esinye seziqendu zabo (ImiGaqo yokuQeqesha ngokwamaNxalenye) njengesiqendu esibonise ukukhupha isisu, esisoloko siyimpikiswano. Kodwa ngenxa yeso sizathu sokuba u-Family Guy engazange abuye umva kwizinto ezinokuphikisana noluntu, umboniso ubuyintandokazi yabantu nkqu nakumashumi eminyaka emva kokukhutshwa kwayo.
Ezi zezona ziqendu zibalaseleyo zoSapho loSapho ekubukeleni iziyobisi ngokutya kakhulu. Ke bamba i-Cola yakho kwaye uqalise ukubukela.
Abalawuli: UDavid Zuckerman, uPeter Shin
Ababhali: USeth MacFarlane, uChris Sheridan, uDanny Smith, uNeil Goldman, uGarrett Donovan, uMike Barker, uMat Weitzman, uRicky Blitt, uGary Janetti, uCraig Hoffman, uSteve Callaghan, uDavid Collard, uKen Goin, uBobby Bowman, uJim Bernstein, uMichael Shipley, uMike Henry , UMark Hentemann, uAlex Borstein, uAlex Barnow, uMarc Firek, uAllison Adler, uJohn Viener, uAlec Sulkin, uDavid Zuckerman, uCherry Chevapravatdumrong, Andrew Goldberg, uDaniel Palladino, uDavid A. Goodman, uTom Devanney, uTeresa Hsiao, uSpencer Porter, uMat Fleckenstein , Ted Jessup, Wellesley Wild, Julius Sharp, Brian Scully, Deepak Sethi, Kirker Butler, Patrick Meighan, Aaron Blitzstein, Marc Firek, Mike Desilets, Artie Johann, Shawn Ries, Gene Laufenberg, Anthony Blasucci, David Ihlenfeld, Alex Carter, Andrew UGormley, uDavid Wright
Abalingisi: USeth MacFarlane, uMila Kunis, uSeth Green, uAlex Borstein, noRyan Reynolds
Amaqonga afumanekayo: INetflix, iDisney Plus Hotstar, iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon, iTunes Store, iHulu, fuboTV, Google Play, YouTube, VUDU, FOX
IWarner Bros: UTom noJerry Imuvi yoopopayi uza ngo-2020, Nantsi yonke into ekufuneka uyazi
U-Alexis Floyd: Sithini isimo sakhe sobudlelwane? Ngubani owakhe wathandana nomdlali kwixa elidlulileyo?
Kutheni le nto uJeremy Renner engazange abuye ukusukela kwi-Rogue Nation Mission: Ayinakwenzeka i-7
Thandaza kude: Ngaba kufanelekile ukubukela okanye akunjalo?
Ixesha le-100 eliKhulu le-7 [I-SPOILERS], Unxibelelwano lweli Xesha kunye nexesha lokugqibela, i-Cast enomdla
U-Kim Kardashian uya kwi-WILD yoSungulo lwe-SKIMS eNtsha- ushiya umncinci ekucingeni
Iintsuku zoBomi bethu: Umtshato kaEric noNichole (UKUVUZA) Unesiphelo Esonwabisayo
UAlex Pina uMdali weMali Heist utyhila ixesha lokuBuya lesi-5 kungekudala uza kubuyela kwiiseti
Imizuzu: Ukunyuka komhla wokuKhutshwa kweGru, Ngubani na oFakwe kwiCast? Iqonga, iTrailer kwaye yintoni esiyaziyo ngale bhanyabhanya?
ULUVO: Ngaba uTravis Scott unetyala ngeAstroworld?
I-50 Cent Ilumkisa iTI Ukuhlala kude naYe emva koThintelo loLwaphulo-mthetho lwamva nje
I-Pokémon: I-Remake yokuqala ye-Movie kwiNetflix kwakhona iphinda inike iiMonsters zakho ozithandayo ukuKhangela okutsha
I-PUBG yeXesha leSelfowuni le-11 ArrivaL yeNdlela yokuLawula, izixhobo ezitsha kunye neemoto, amabhaso asimahla, ulusu olutsha, iimpahla kunye nomhla wokukhutshwa
UJohn wick njengeemovie
Uza kuhlasela kwixesha le-4 le-titan kwi-Netflix
Eyona midlalo bhanyabhanya ye-anime ngo-2014
ubukumkani bezilwanyana isiqendu 7 buyisa kwakhona